အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » သွေးတိုးရောဂါ » အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်ခြင်း
အမျိုးသား​တွေမှာ စိတ်​ဖိစီးမှုထိန်းချုပ်​ခြင်းဆိုတာဘာလဲ ?
စိတ်​ဖိစီးမှုက ​ဘေးရန်​ရှိပြီး မျက်​​မှောက်​​ခေတ်​မှာ အမျိုးသား​တွေရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးကိုခြိမ်း​ခြောက်​​နေတဲ့အရာတစ်​ခုအဖြစ်​ရှိ​နေပါတယ်​။ ​လေ့လာမှု​တွေအရ ဒီလိုစိတ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာ ​နောက်​ဆံတင်းမှု​တွေ ဖိစီးမှု​တွေက နှလုံး​ရောဂါ၊ ​သွေးတိုး၊ ​ခေါင်းကိုက်​၊ ခါးနာ၊ ဆီးချို၊ ကင်​ဆာနဲ့ ကိုယ်​ခံအားကျခြင်းတို့နဲ့ တိုက်​ရိုက်​ဆက်​စပ်​​နေတာ​တွေ့ရပါတယ်​။
စိတ်​ဖိစီးတာဆိုးရွားတဲ့အဆင့်​ကို​ရောက်​​နေတဲ့အမျိုးသား​တွေဟာ ​ဆေးလိပ်​​သောက်​ခြင်း၊အရက်​​သောက်​ခြင်း၊အပြုအမူလွန်ကခြင်းနဲ့ ​ဆေးစွဲခြင်းစတဲ့မ​ကောင်းတဲ့
အမျိုးသား​တွေမှာ စိတ်​ဖိစီးမှုကို ​ဘယ်​လိုထိန်းချုပ်​ရမလဲ ?
သတင်း​ကောင်းက​တော့ လူ့ကိုယ်​အ​ပေါ်ဆိုးကျိုးဖြစ်​​စေတဲ့ စိတ်​ဖိစီးမှုကို​လျှော့ချဖို့နည်းလမ်းအများကြီးရှိတယ်​ဆိုတာပါဘဲ။
​လေ့ကျင့်​ခန်း​တွေက ကျန်းမာ​ရေးတစ်​ခုလုံးကို​ကောင်း​စေရုံသာမက စိတ်​ဖိစီးမှုကိုလည်း ​လျှော့ချ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါက စိတ်​ဖိစီးမှုကို ထိန်းချုပ်​ဖို့နဲ့ ပတ်​သက်​ရင်​ အ​ကောငးဆုံး စိတ်​အချရဆုံးနဲ့ အကန်​အကျအသက်​သာဆုံးနည်းဖြစ်​ပါတယ်​။
ကဖင်းဓာတ်​ ​​သောက်​သုံးမှုများခြင်းက သင့်​ရဲ့အက်​ဒရီနယ်​ဂလင်းကို အကြီးအကျယ်​ဝန်​ပိ​စေတဲ့အတွက်​ ဖရိုဖရဲ​တွေဖြစ်​ကုန်​ပါလိမ့်​မယ်​။ အထူးသဖြင့်​ စိတ်​ဖိစီးတတ်​တဲ့ ရာသီလာချိန်​မျိုမှာ ကဖင်း​သောက်​သုံးခြင်းကို ​လျှော့ချ​ပေးခြင်းက သင့်​အက်​ဒရီနယ်​ဂလင်းကို အကျိုးပြုပါလိမ့်​မယ်​။
အိပ်​​ရေးပျက်​ခြင်းနဲ့ အိပ်​​ရေးမဝခြင်းက သင့်​ကိုစိတ်​ကျ​စေပါတယ်​။ တစ်​ညကို အိပ်​ချိန်​ ၆ နာရီက​နေ ၈ နာရီထိရှိခြင်းက သင့်​ကိုစိတ်​ဖိစီးမှု ​တွေထိန်းချုပ်​နိုင်​သလို ​နောက်​ထပ်​စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေကိုလည်း စီမံနိုင်​ပါလိမ့်​မယ်​။
အသက်​ရှူ​လေ့ကျင့်​ခန်းက သင့်​စိတ်​အခြအ​နေကို​ပြောင်းလဲ​ပေးရုံသာမက သင့်​​သွေးတိုးကိုကျ​စေပါတယ်​။​အောက်​ဆီဂျင်​ကိုမြှင့်​တင်​​ပေးပြီး သင့်​ခံစားမှုကို ​ကောင်းသွား​စေပါတယ်​။
သင့်​အကြိုက်​အ​ပေါ်မူတည်​ပြီး တရားထိုင်​တာ ဘုရားဝတ်​ပုတာ​တွေလုပ်​နိုင်​သလို ရုပ်​ပိုင်းဆိုင်​ရာတည်​ငြိမ်​မှုအတွက်​ ​ယောဂနဲ့ ထိုက်​ကျိကိုပါလုပ်​နိုင်​ပါတယ်​။
သင့်​ကိုစိတ်​ဖိစီး​စေတဲ့ အ​ကြောင်းအရင်း​တွေကို​ဖြေရှင်းလိုက်​တာက သင့်​ကိုစိတ်​ဖိစီးမှုက လွတ်​​စေပါတယ်​။ သင်​မတတ်​နိုင်​တဲ့အရာ​တွေဆို ဘယ်​သူ​တွေဘာဘဲလာ​တောင်းဆို​နေပါ​စေ ငြင်းဆန်​တတ်​​အောင်​လုပ်​ပြီး စိတ်​မဖိစီး​အောင်​လုပ်​ပါ။
မကြာ​သေးခင်​က​လေ့လာမှု​တွေအရ အမျိုးသား​တွေရဲ့စိတ်​ဖိစီးမှု​တွေရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်​နှုန်းက ယာဉ်​​ကြောပိတ်​ဆို့မှု​တွေ​ကြောင့်​ဖြစ်​ပြီးဒါက အမျိုးသမီး​တွေထက်​ ၇ ဆ ပိုများတယ်​လို့ဆိုပါတယ်​။ ဖြစ်​နိုင်​မယ်​ဆိုရင်​ အ​လောတကြီးမဖြစ်​ရ​အောင်​ကြိုထွက်​တာမျိုးလုပ်​ပါ။ ​ဈေး​တွေမှာ လူမကြပ်​တဲ့အချိန်​မျိုးမှ ​ဈေးဝယ်​ပါ။ သင့်​ကို​ဒေါသထွက်​​စေတဲ့သူ​တွေနဲ့လည်း ကြာကြာ​နေတာ​ရှောင်​ပါ။
သင့်​ဘဝမှာ သင်​ဘယ်​​လောက်​ပဲကြိုးစားပါ​စေ သင်​မ​ပြောင်းလဲနိုင်​တာ​တွေရှိပါတယ်​။ ဥပမာ – မိုးရွာ​အောင်​ နှင်းကျ​အောင်​ ရာသီဥတုကို ကိုယ်​လိုသလိုမ​ပြောင်းနိုင်​တာမျိုး​ပေါ့။ အဲဒီအစားသင်​မ​ပြောင်းလဲနိုင်​တဲ့အရာ​တွေကို နှစ်​သ်​ကြည့်​ဖို့ ကြိုးစားကြည့်​ပါ။
ကျွန်​​တော်​တို့က ကျွန်​​တော်​တိုိ့တ်​ဖိစီးမှု​တွေကို အလွန်​အကျွ့လုပ်​ခြင်း​ကြောင့်​ ကိုယ်​တိုင်​ဖြစ်​​စေနိုင်​သလို သူ​ဌေးကဘဖြစ်​ဖြစ်​ သူငယ်​ချင်းကဘဖြစ်​ဖြစ်​ ​တောင်းဆိုတာတစ်​ခုခုကို မငြင်းတတ်​တဲ့အတွက်​ စိတ်​ဖိစီးကြပါတယ်​။ ကတိ​ပေးမလွန်​ပါနဲ့၊ သင်​တတ်​နိုင်​မယ်​ထင်​သ​လောက်​ဘဲ အာမခံပါ။
အ​ရေးအကြီးဆုံးအလုပ်​​တွေကို ​အ​စောပိုင်းလုပ်​ခြင်းက သင့်​ကိုအာရုံပိုစိုက်​​စေနိုင်​ပါတယ်​။ ဒါကကျန်​ရှိ​နေတဲ့တစ်​​နေ့တာကို သင့်​ကိုစိတ်​ဖိစီးမှုကင်း​စေပြီး တခြားလုပ်​ရမ့်​အရာ​တွေကို စာရင်းမှတ်​ပြီးဆက်​လုပ်​ပါ။
10 Ways for Men to Reduce Stress. http://www.everydayhealth.com/family-health/mens-health/combat- stress.aspx. Accessed September 10th, 2016.
Strip Away Stress. http://www.menshealth.com/health/19-stress- management-tips.
Accessed September 10th, 2016.
Stress Management For Men. https://greenlivingaz.com/stress-management- for-men/.